टिप्पणी : प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्ने २ टेक्निक, 'कि आफु राम्रो गर्ने, कि प्रतिष्पर्धीको खुट्टा तान्ने' बैंकर्स संघले दोश्रो रोज्यो !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » टिप्पणी : प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्ने २ टेक्निक, 'कि आफु राम्रो गर्ने, कि प्रतिष्पर्धीको खुट्टा तान्ने' बैंकर्स संघले दोश्रो रोज्यो !
काठमाडौँ- सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, 'प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्ने २ टेक्निक, 'कि आफु राम्रो गर्ने, कि प्रतिष्पर्धीको खुट्टा तान्ने' ! यो सास्वत सत्य हो । तर यहि बीचमा यो पनि सत्य हो कि प्राय जीत आफु राम्रो गर्नेको हुन्छ । शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघले जे गर्यो त्यो प्रतिष्पर्धीलाई कमजोर बनाएर आफु राज गर्ने सिद्धान्तले प्रेरित भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
कसैअघि पनि लुकेको छैन, एनआइसी एसिया बैंकविरुद्ध संगठित रुपमै थुप्रै बैंकरहरु लागेका छन् । एनआइसी एसियाको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अहिले नेपाल बैंकर्स एसोसीएसनको अध्यक्षमा छन् । यसै पनि उनको सीइओको कार्यकाल नियम विपरित भएको भन्दै थुप्रै ठाउँमा उजुरीहरु विचाराधीन छन् । आफ्नो प्रतिष्पर्धीलाई सिध्यौना संघको प्रयोग गरेका ढुंगानाले यसपालीपनि 'फुटाउ र राज गर'को सिद्धान्तअनुसार अगाडी बढेको देखिएको छ । र सोहि क्रममा ढुंगाना नेतृत्वको बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाएको छ ।
चार्टड एकाउन्टेन्सी पढेका ढुंगानाले बुझ्नुपर्ने हो, उनले जे गरे त्यो खुला बजार प्रतिस्पर्धाको अभ्यास विरुद्धको कदमबाहेक केहि होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सबैले स्वतन्त्र रुपमा कारोबार गर्न पाउँछन् । यसविरुद्ध संघका नाममा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आफ्नो स्वार्थ्यपूर्तिका लागि अरुलाई फुटाउने र आफु राज गर्ने अभ्यास गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । संघको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारणको १२४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बोकेको बैंकले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दा ढुंगानाको अस्तित्व कहाँ पुग्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
कार्टेल गरेर ब्याजलाई तल झार्न खोज्ने, आफु निक्षेपकर्तालाई राम्रो ब्याज दिन नसक्ने अनि बजारमा मनपरी गर्न खोज्ने ढुंगानाको यस्तो कदमले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै राम्रो गर्दैन भन्ने कुरामा दुइमत छैन । सबै जना मार्केट इक्युलिबिरियम अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ढुंगानाले बुझ्न जरुरी छ ।